आमालाई प’हिरोले लग्यो, छोरीहरू कि’रिया बसे – Sanchar Patrika
आमालाई प’हिरोले लग्यो, छोरीहरू कि’रिया बसे
July 26, 2020 145
स्याङ्जा : गल्याङ् नगरपालिका–१० सिमलसौंराका २५ वर्षीया देवी राना पहिरोमा परी ज्या’न गुम’ाएकी आमाको कि’रिया बसिरहेकी छिन्। छोरीले पनि बाबु आमाको कि’रिया गर्न मिल्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दे १२ दिन कि’रिया बस्ने उनले बताइन्। तीन छोरी मध्ये उनी माइली हुन।
जेठी छोरी मालती विवाहित र कान्छी छोरी नारायणी घाइ’ते भएकाले माइली छोरी देवी छोरालेझैें गरी किरि”या बसेकी छिन्। अरु छोरीहरू पनि शुद्ध रही आमाको अवन्तिम संस्कारमा जुटेका छन्।साउन ७ बुधवारको पहिरामा परी आमा माया रानाको मृ’त्यु भयो भने आमासँगै सुतेकी नारायणी घा’इते भइन्। घाइते उनलाई उपचारका लागि पोखरा पठाइएकोे थियो।
आमाको अ’न्तिम सं’स्कारमा सहभागी हुन उनलाई बिहीवार स्याङजा ल्याइएको हो। हाल उनी वालिङ स्थित आफन्तकहाँ बसेर उपचाररत छन्। उनले घरमा पुगेर किरिया बस्न सकिनन्। उनको खुट्टामा चो’ट छ।
मृ’तक ५२ वर्षीया मायाको बिहीवार पवित्र तिर्थस्थल रामनदीधाम राम्दीमा हिन्दु संस्कार अनुसार अन्त्येष्टि गरिएको छ। शुक्रबारदेखि धार्मिक विधि अनुसार काज कि’रिया सुरु गरेको छिमेकी फर्सुराम खनालले जानकारी दिए।
मृ’तक मायाका पति गुमबहादुरु राना भारतको सिलगुढीमा बस्छन्। भारतीय सेनाबाट अवकाश पाएका ५५ वर्षीय गुमबहादुर अर्काे घरजम गरी उतै बसेका हुन्। पत्नीको नि’धन भएको खबरपछि घर फर्केका उनी उनी होम क्वारेन्टाइनमा छन् ।
जेठी छोरी मालतीको विहे गल्याङमा भएको हो। पछि उनी तराई झरिन्। उनले माइली बहिनी देवीलाई पनि उतै राखेर पढाउँदै आएकी थिइन्। अहिले उनी स्नातक तहमा पढ्छिन्।
‘आमाले अनेक दुःख, समस्या झेल्दै हामीलाई हुर्काउनु भयो, बढाउनुभयो, पढाउनुभयो यसप्रति कृतज्ञ छु’ देवीले भन्छिन्– ‘आमाको सेवा भावप्रति म किरिया बसेकी हुँ, मेरा छोरा नै तिमी हौं’ आमाले सधैं यसो भन्नुहुन्थ्यो।’
गल्याङमा आमा र कान्छी बहिनी नारायणी बस्दैै आएका थिए। नारायणीले पनि प्लस टु सकेर वालिङमा स्नातक तहको अध्ययन सुरु गरेकी छिन्।
गत बुधबार करिब २५ मिटर माथिबाट झरेको पहिरोले राना परिवारको घर, गोठ पुरेको छ। घर अगाडी बनाइएका शौचालय, धारा, आगँन झारेर करिब ६० मिटर तल पु¥याएको छ । (अन्नपुर्ण पोष्ट बाट)
Prevचोरको नयाँ शैली : स्कुटरको डिकीबाट पैसा गायब !
Nextक्वाड्रुपल क्यामेरासहित ओपो ए५२ नेपालमा सार्वजनिक, यस्तो छ विशेषता र मूल्य
घर किन्नेलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋ’ण दिँदै बैंकहरू, कुन बैंककाे ब्याजदर कति, के के चाहिन्छ कागजात ?
कोरोना संक्रमित छोरा आईसोलेशनमा : घरमा आमाको नि;धन